सरकार हावादारी गफ गर्दै हिँडेको छः अध्यक्ष राणा
काठमाडौं । राप्रपा प्रजातान्त्रिकका अध्यक्ष पशुपति शमशेर जबराले तीनै तहको सरकारले कर बढाएर जनताको ढाड सेकेको बताएका छन् । ‘सरकार समृद्धिका नाममा जनतालाई कर थुपार्दै गएको छ, त्यसैले ओली सरकारको समृद्धि भनेकै कर अभिवृद्धि हो,’ उनले भने ।
सोमबार पार्टी कार्यालयमा आयोजित पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष राणाले सरकार ‘हावादारी गफ’ गर्दै हिडेको बताए । ‘कहिले पानी जहाजको कुरा त कहिले रेल ल्याउने सपना देखाउने तर सामान्य काम पनि गर्न नसक्ने । भाषणमा सिन्डिकेट तोडियो,निर्माण ढिलाइ गर्ने ठेकेदार कारवाही गर्ने भनियो तर खै ? समस्या ज्यूँकात्यूँ नै छ,’अध्यक्ष राणाले भने ।
सो अवसरमा राप्रपा नेपालका केन्द्रीय सदस्य सरोज अधिकारी र सुरज पाण्डे लगायत १ सय ५१ जना कार्यकर्ता राप्रपा प्रजातान्त्रिकमा प्रवेश गरेका थिए । पार्टी प्रवेश गर्नेमा कतिपय राप्रपा राष्ट्रवादीका कार्यकर्ता पनि छन् । त्यस अवसरमा राप्रपा प्रजातान्त्रिकका सह–महामन्त्री बाबुराम बस्नेतले सरकारले डा. गोविन्द केसीसँग गरेको सहमति तुरुन्तै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए ।
आफ्नो पार्टीले वर्तमान सरकारका सकारात्मक कामहरुको समर्थन गरेपनि जनहित विपरित काम गरेमा विरोध गर्ने बस्नेतको भनाइ छ । पार्टीले चर्काे मुल्य वृद्धि, कर तथा सरकारको निरंकुश कार्यशैली विरुद्ध साउन १६ गते विरोध प्रदर्शन समेत गर्ने भएको छ ।
प्रकाशित १४ साउन २0७५ , सोमवार | 2018-07-30 12:24:04
ओली सरकार आफैं ढल्ने सूचना छः मनिष
काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का स्थायी समिति सदस्य एवम् सांसद देवेन्द्र पौडेलले बजेट कार्यान्वयनसँगै मन्त्रिमण्डल
ओली सरकारले १६ महिनामा केही नयाँ
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका युवा नेता प्रदीप पौडेलले वर्तमान सरकारले दुई तिहाईको आडमा एकाधिकार र अधिनायकवाद लाद्न खोजेको आरोप लगाएका